musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Cook Islands - Niue Kufamba Bubble kunogona kutanga mwedzi uno
Australia Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Cook Islands Kuputsa Nhau • New Zealand Kupwanya Nhau • nhau • Niue Kupwanya Nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Anopfuura mavhiki maviri chete mushure mekuziviswa kwefambi yekufamba pakati penyika mbiri dzezvitsuwa zveCook Islands neNiue, vakuru vakuru vanoti kutanga kweiyi bubble yekufamba kuchatanga kanokwana mwedzi miviri zvisati zvaziviswa. Iyi bubble inobvumidza vafambi kuenda padanho-danho rinosungirwa kwemazuva gumi nemana ekufamba voga. VaNiueans vanogona zvakare kuenda kuNew Zealand vasina kuvharirwa nekukasira pakati paNdira, uye mabhuru ekufamba pakati peCook Islands neAustralia ari kugadzirwawo.
Vakuru muCook Islands vakaratidza kuti Cooke Islands - Niue rwendo rwekufamba inogona kutanga kutanga kwaNdira 2021. chitsuwa cheNiue idunhu diki rechitsuwa chakakomberedza mamaira mazana mashanu kubva kumahombekombe kweNew Zealand. Nhau idzi dzinouya anodarika masvondo maviri mushure mekunge Mutungamiriri wenyika, VaJacinda Ardern naBrown vaburitsa mushumo pamwe chete vezvenhau vachizivisa zviri pamutemo bundu rekufamba pakati penyika mbiri.
Kutanga kweiyi bubble yekufamba ingangoita mwedzi miviri yapfuura pane izvo hurumende yakanga yazivisa kare mumasvondo mashoma apfuura kuti zambuko remhepo raizosimbiswa kupera kwaKurume. Hofisi ye Zvitsuwa Kuku Prime Minister, Mark Brown, vakaudza vemuno kuti basa rekugadzirira vezvenhau riri kuenderera pakati penyika mbiri.
Iyi bubble yekufamba inobvumidza vanhu kubva kumarudzi maviri ezvitsuwa kuti vafambe vakasununguka vasina kuda kuzvisarudzira vega kwemazuva gumi nemana vanhu pasi rese vava kuziva.
Ardern naBrown vakati panguva iyoyo vaive varaira vakuru kuti varambe vachishanda pamwechete kuisa matanho ese anodikanwa pamberi pebhodhi rekufamba iro ivo vakati raizoitika mukota yekutanga yegore rinouya.
Kugadzira zvinhu muNew Zealand
Ardern akambotaura kuti pachange paine nzira yakapetwa kune iyo bhiriji remhepo - nedanho rekutanga muchiitiko ichi kuitwa kwekuparadzaniswa kwekusununguka muNew Zealand kune chero munhu anouya achibva kuCook Islands. Iwo Cook Islands anoramba ari imwe yenyika shoma pasi rese uye mudunhu rePacific kugara COVID-isina.
VaNiueans vanogona kukwanisa kuenda kuNew Zealand vasina kuvharirwa nekukurumidza pakati paNdira. Mutungamiriri weNiue, Dalton Tagelagi akati anga achigara achitaura nehurumende yeNew Zealand nezve kubhowa kwekufamba. Tagelagi, ane chitsuwa chiriwo chikamu chenyika yeNew Zealand, akati kutanga nekufamba nzira imwe chete ndizvo zvaangade kuNiue.
“Ini ndinofunga nzira mbiri idzi dzinenge dziri mukota, toti Kurume anotevera, asi ndiri kutarisira nzira imwe chete yekuve muna Ndira kana Kukadzi zvirinani. Munoziva, kutanga kwekuyedza uye kuona mafambiro ari kuita zvinhu asi chinangwa chikuru uye chinangwa chikuru chichava nzira mbiri dzekuparadzanisa kufamba kwemahara. ”
Dalton Tagelagi akati kana Cook Islands yekufambisa bubble ikabudirira, saka Niue ingangotevera munguva pfupi inotevera. "Vanhu vepachitsuwa ichi vafamba zvakanaka zvinoshamisa kuburikidza nerimwe remakore akaomesesa echitsuwa ichi," akadaro.
Mushure memazana emakore ekukura, denda rekoronavirus rakaona nyika ye1600 yevanhu indasitiri yekushanya yakadzika kusvika zero. Tagelagi akati kunyangwe hurumende yakatsigirwa nemari nenyika dzinopa, kunyanya New Zealand, zvave zvisiri nyore.
“Takatofanira kudzokera kumashure, ndinofungidzira kudzokera kunzira yekare yekupona kuno kwatinogara takazendamira zvakanyanya kunyika nepagungwa kuti tizviriritire. Zvave zvakaoma, asi tiri kubatisisa chaizvo, ”akadaro.
Ardern atozivisa mabhuru ekufamba neCook Islands neAustralia, ayo anofanirwa kuvhura mukota yekutanga ya2021.